Isbeddelka Cimilada Dunida: ATMOSFEERKA DHULKA IYO ISBEDDELKA CIMILADA
Ilaahay Subxaanahu Wa Tacaalaa Wuxuu Fadligiisa iyo Naxariistiisa Awgeed ku dahaara ama ku wareejiyay dhulka xaddi badan oo hawo kala duwan iyo daruuro ah; si aan u helno cimilo nolol u saaxiib ah. Atmosfeerka la'aantiis heer-kulka dhulku wuxuu qiyaas ahaan gaari lahaa 30' ayuu ka hoosayn lahaa sida uu hadda yahay; taas oo ah qabow aan lagu noolaan karin.... ALXAMDU LILLAAH.
Fallaaraha qorraxdu markay ka soo gudbaan atmosfeerka oo ay soo gaaraan dhulka; dhulkuna kulka iyo tamarta uu u baahan yahay mooyee inta kale dib ayuu isaga celiyaa, laakiin nasiib wanaag atmosfeerka ayaa isbaaro u dhigta oo kala barna cirka u tuuro, halka uu barka kale isla dhulka dib ugu soo celiyo kana caawiyo dhaulka inuu mar walba yeesho kul iyo tamar u dhiganta qabowga badan; sidaas ayuuna miisaan xikmadaysan Ilaahay horey noogu diyaariyay...ALXAMDULILLAAH.
Haddaba wan fahmi karnaa in ay daruuruhu dhulka kulka ka imanaya ku celiyaan oo xilliyada roobka da'ayo cirkuna daruur jiq la yahay aan dareeemayno kulayl badan, su'aashuna waxay tahay: maxaan kul badan u dareennaa marka aysan daruuro joogin cirka, waddankuna uusan ahayn mid cimilo kululi ku badan tahay? Waa su'aal aad u fiican.
Jawaabtana waxaan ka helaynaa waxa hadda loo yaqaan ISBEDDELKA CIMILADA. Cunsurrada hawada ah ee loo yaqaan Greenhouse Gases oo ay ka amid yihiin CO2, Methane, iwm aayaa ayaguna waxay awood u leeyihin fallaaraha kulka ee dhulka ka imanaya (Long-wave Radiation) in ay qabsadaan, kala bar cirka u diraan, barka kalena dhulka ku celiyaan. Taasuna waa sababta aan kul u dareenno xilli aysan daruuro joogin xataa habeen ha ahaatee.
Haddaba waxaa welwelka keenaya waa hawooyinka greenhouse gas-ka oo atmosfeerka ku sii badanay falal uu bani-aadamku samaynayo awgeed, taasoo ay ugu badan tahay shidaalka sida siyaadada ah loo isticmaalayo oo loo gubayo. Kolka waxaan fahmi karnaa in haddii uu bani-aadamku tiro ahaan sii bato, shidaalka tamar ahaanta loo isticmaalayaana uu siii badan doono; islamarkaasna karboonkuna hawada ku sii badan doono taas oo sababi doonta kulayl badan oo aan annagu isu keennay ee uusan Ilaahay nagu jirrabin. Kolka waa xaqiiqo in Ilaahay uusan addoomadiisa dulmin ee ay ayagu is-dulmaan.
Posted by Wacyi-Gelinta Isbeddelka Cimilada at 5:34 PM
Soomaali biogas May 10, 2017 at 2:43 PM
xog aruurin wanaagsan lakiin waxa qorshahaada ka dhinaay sida looga hortagi karaaya